Manjaro 2022-02-14 inosvika nenhau dzisingashamisi, dzakadai | Linux Addicts
Manjaro 2022-02-14 anosvika kuZuva raValentine aine nhau dzisingashamisi, dzakadai seFirefox 97 kana Cutefish 0.7
Kune avo vasina kuroora uye / kana vasina ruzivo, nhasi izuva rakajairika. Izvo zvakare kune avo vanoti Zuva raValentine izuva rakagadzirwa chete uye rakatinakira isu kuti tiite zvimwe mari nechikonzero cherudo, asi, kune vazhinji vakaroorana, nhasi izuva rekupemberera. Isu tiri muboka ratiri, kana isu tiri vashandisi veimwe yeanonyanya kufarirwa kugoverwa kwakavakirwa paArch Linux, ino Kukadzi 14 ichave yakanyanya kukosha: ivo vaparura manjaro 2022-02-14.
Kuverenga rondedzero yezvinhu zvitsva, munhu haagone kubatsira asi kufunga kuti nhasi vaburitsa vhezheni yakagadzikana nekuti izuva rakakosha, asi. hazvina zvakawanda zvekusimbisa. Iko hakuna kuvandudzwa kukuru muGNOME, kwete kunyange muKDE, uko chimwe chinhu chinogara chichidonha, asi Manjaro 2022-02-14 inokodzera vashandisi veCutefish, Maui uye Deepin, uko mamwe mapakeji akagadziridzwa uye akatogamuchira shanduro itsva dzedesktop.
Manjaro anoratidza 2022-02-14
Shanduro iyi inobudirira iyo yaFebruary 5 yapfuura, uye timu yekuvandudza inosimbisa zvinotevera:
Mazhinji eKernels akagadziridzwa.
Cutefish yakagadziridzwa kusvika 0.7.
Mamwe mapakeji eDeepin akagadziridzwa.
Firefox ikozvino yave pa97.0.
Maui yakagadziridzwa kuita 2.1.1.
systemd inobvisa cloudflare kubva kune backup DNS maseva.
Yenguva dzose inogadziridza kubva kune dzakapfuura shanduro, kusanganisira Haskell uye Python.
Hazvisi zvitsva, asi ndinofunga zvakakosha kuyeuka, AUR mapakeji aive akavakirwa paPython 3.9 angangoda kuvakwa patsva, kunze kwekunge zvatoitwa pavakasvetuka mavhiki apfuura.
Manjaro 2022-02-14 ndeye nyowani yakagadzikana vhezheni, kureva, mapakeji matsva anogona kuiswa zvakananga kubva kune imwechete yekushandisa system. Munguva pfupi yapfuura, nharaunda iri kufara chaizvo nemashandiro anoita Pamac, saka yanga iri sarudzo yakanaka kwenguva yakareba, uye zvakatonyanya kana isu tisingadi kushandisa terminal. Kune avo vanosarudza yekare, ese mapakeji matsva anogona kuiswa nekuvhura terminal uye kutaipa sudo pacman -Syu. Kana iri mifananidzo yeISO, yakanyanya kuenderana neiyo Manjaro 21.2.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 2022-02-14 anosvika kuZuva raValentine aine nhau dzisingashamisi, dzakadai seFirefox 97 kana Cutefish 0.7
Ndave neManjaro Linux (Gnome) kwemazuva mashoma, uye ndiri kufara chaizvo. Kwete chete nekuti yanga isati yave neiyo huru distro kwenguva yakareba, asi zvakare nekuti Manjaro yakagadzikana zvakanyanya kusvika zvino. Nguva yekupedzisira pandakaona zviri nyore izvi yaive ne openSuse uye KDE. Zvino kugadzirisa.
Sekugadzirisa kuri nyore, ISO yazvino ndeye 21.2.3. Iyi ISO inogona kuwanikwa mu <> post pane iyo official Manjaro forum.
Kali Linux 2022.1 inosvika paZuva raValentine iine tweaks kune yayo interface uye zvishandiso zvitsva.
Lutris 0.5.10 Beta 1 yasvika nezvimwe zvirimo